Lalao olympika: tsy namokatra ny taranja lomano sy ny fibatana fonjamby | NewsMada
Lalao olympika: tsy namokatra ny taranja lomano sy ny fibatana fonjamby
Ratsy ny vokatra ho an’ireo atleta malagasy niatrika ny taranja fibatana fonjamby sy ny lomano nandritra ny lalao olympika tontosaina any Tokyo Japana, omaly…
Na dia niezaka nametraka ny maha matihanina azy aza ireo atleta malagasy mianadahy nanoloana ireo mpifanandrina maro, tsy nisy ny fandrobahana medaly ho an’ny atleta malagasy, omaly. Ho an’ny teo amin’ny fibatana fonjamby sokajy latsaky ny 67 kg, izay nandraisan’i Tojo anjara, tafiditra ho laharana fahefatra teo amin’ny vondrona B ny lehilahy rehefa nahazo isa 285. Io isa io, fitambatan’ny “arraché” 130 kg sy ny “epaulé-jété” nilanja 155 kg nataony. Ankoatra izay, nitana ny laharana fahefatra tao amin’ny vondrona B nisy azy koa i Eric. Nitotaly 264 ny isa azon’ity atleta malagasy ity nanoloana ireo mpandray anjara maro nifaninana taminy, io omaly io. Teo amin’ny “arraché”, nilanja 114 kg ny an’i Eric raha toa ka 150 kg teo amin’ny “épaule-jété”. Ireo vokatra ireo anefa, tsy ampy nentin’izy mirahalahy niakatra ny dingana manaraka ka nifarana teo ny lalao ho an’ireto atleta malagasy ireto ary nijanona ho laharana faha-11 avy teo amin’ny sokajy nisy azy izy mirahalahy.
Tsy namokatra ny taranja lomano
Teo amin’ny taranja lomano nandraisan’ny atleta malagasy roa anjara, samy tsy tody tamin’ny dingana famarana Rabarijaona Tiana Murielle sy Rasolonjatovo Mickael. 4 minitra sy 28 segondra ary 41 ampahazatony no namitan’i Muriella ny teo amin’ny halavirana 400 m. Nitana ny laharana fahafito tamin’ireo mpifaninana niisa fito, araka izany, ity teratany malagasy ity. Tsy ampy niakarany tamin’ny dingana famaranana io fe-potoana vitany io ka tapitra teo ny fifaninanana ho azy. Tetsy an-kilany, 59,81 minitra kosa no fe-potoana nahavitan’i Mickael ny 100 Dos teo amin’ny sokajy lehilahy. Io vokatra io, izay anisan’ny tsy nampitsanga-menatra ity atleta ity satria tafiditra ho zava-bita tsara indrindra afrikanina faha-17 amin’ireo firenena 54 io vokatra io. Na izany aza, nifarana teo koa ny lalana ho an’i Mickael.
Mpifaninana manaraka hiakatra kianja kosa i Franck sy i Damiella Nomenjanahary. Ity farany, izay eo amin’ny taranja Judo ka hifanandrina amin’ilay teratany italianina M. Contrachio, ny talata ho avy izao. Andrasana noho izany ny vokatra eo amin’ireo atleta roa ireo.